Asaivo nosoratan'ny paperner, profesora, ny thesisanao bakalorea
Ampahatsiahivo ny fangatahana!
Vaovao izao: Resadresaka nifanaovan'ny mpanoratra taorian'ny fametrahana ny baiko. Tanjona: kalitao tsy mety simba! Ny serivisy dia mihatra amin'ny haavon'ny kalitao antonony.
Manafatra dieny izao!
vidin'ny Departments hevitra Iza moa izahay?
vidin'ny Manafatra dieny izao! Departments hevitra Iza moa izahay?
Asaivo voasoratra ny asan'ny tetikasa
Ny fiarahan'ny ekipa manaitaitra dia omaly! Avelao izahay hanomana ny tetikasanao sarotra sy ny asan'ny tarika. Manampy amin'ny fikarohana, lahatahiry, atiny, fampisehoana izahay na manolotra fonosana feno.
Ny tetikasa dia miasa - manoratra ny tenanao	na	avelao hanoratra
Ny asa tetikasa mandritra ny fampianarana dia tokony hatao amin'ny fomba isan-karazany. Tsy misy lohahevitra manokana momba ny asan'ny tetikasa. Ity endrika enti-miasa ao an-trano ity dia mitaky fitakiana manokana ho an'ny mpianatra. Amin'ny lafiny iray, ny fiasana ao amin'ny ekipa iray. Etsy ankilany, asan'ny tetik'asa iray mampiseho fa nianatra nampihatra ny fitsipiky ny teôria siantifika ireo mpianatra. Ilaina ny asa mahaleo tena ary ny siansa dia ampitaina amin'ny ekipa iray. Ny asan'ny tetikasa dia tanterahina amin'ny ambaratonga maro samihafa. Mifanohitra amin'ireo enti-mody an-tsoratra fotsiny, dia misy ny fitsapana samihafa sy vahaolana mety horesahina ao amin'ny ekipa. Amin'ny fifanakalozan-kevitra, noho izany, ny lafiny vaovao dia raisina izay mety tsy noheverina ho asa tsy miankina amin'ny ekipa. Izany dia mahatonga ny tetikasa hiasa mahaliana kokoa ho an'ny olona rehetra tafiditra, saingy mitaky fiaraha-miasa marobe avy amin'ny mpikambana ao amin'ny ekipa. Ny fiaraha-miasa dia asa fiaraha-miasa fa tsy fanatanterahana ny hevitrao manohitra ny fanoherana rehetra ao amin'ny ekipa.
Fifandraisana ao amin'ny ekipa
Na izany aza, ny fahaizana miasa amin'ny ekipa dia tsy midika hoe manambany tena amin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipa hafa. Ekipa iray koa dia miaina amin'ny ady sy ny fitsikerana. Ny fifandraisana ao anaty ekipa noho izany dia lafiny iray tena lehibe. Ny fifandraisana dia midika hoe fifanakalozam-baovao sy famantarana. Na izany aza, ny fifandraisana dia mihoatra ny teny tononina. Ny fahaizana sy fahaizana mifampiresaka amin'ny fiteny no mampiavaka ny olona amin'ny zavamananaina rehetra eto an-tany. Ny biby dia manana fotoana hifandraisana. Saingy any amin'ny faritra tsy am-bava no anaovana izany. Ny fifandraisana dia mihoatra ny fiteny fotsiny. Ny sehatry ny fahafaha-miteny tsy am-bava dia misy fihetsika, feon'ny feo, ary ny fijery rehefa miteny. Raha ny marina, ny fifandraisana am-bava dia 10% fotsiny amin'ny zavatra hitantsika. Ny ankamaroan'ny fampahalalana dia ampitaina tsy am-bava. Ny siansa momba ny serasera dia nahasarika ny sain'ny gradation izay itehirizana ny fampahalalana ao an-tsaintsika: ny 10% fotsiny no vakiana no zakaina ao anaty fitadidiantsika. 20% farafahakelin'ny antso no voatahiry. Ny ankamaroan'ny fampahalalana - ny 70% ambiny - dia ampitaina amin'ny alàlan'ny famantarana tsy am-bava.
Araka ny filazan'i Lencioni, The Five Dysfunction of a Team (2002), misy lafin-javatra dimy ilaina izay tsy voatery hahasoa ny miasa ao anaty ekipa.
Dysfunction an'ny ekipa
Mifanohitra amin'izany, misy ny masontsivana izay mampiavaka ny fiaraha-miasa ekipa. Ireo mpikambana ao amin'ny ekipa dia tena liana amin'ny valiny azo tratrarina ao anatin'ny fotoana iray. Ny andraikitra ao amin'ny ekipa sy ny ekipa dia mametraka ny tombontsoany manokana any aoriana. Ny firaisankina vokatr'izany dia mitondra any amin'ny valiny tsara hatrany. Ny famokarana ny ekipa no voalohany. Ny fampandrosoana ny vahaolana siantifika dia vokatry ny fandeferana amin'ny hevitra samy hafa.
Avelao hanoratra ny asanao
Fanampiana matihanina amin'ny asa tetikasa
Tahaka ny siansa hafa, ny sangan'asa dia misy fikarohana fikarohana literatiora betsaka sy ny fanoratana ny valiny (ampahany). Mandritra ny fianaranao dia tsy voatery hiatrika ny asan'ny tetikasa ankehitriny ianao. Mila miomana amin'ny fanadinana sy devoara hafa miaraka amin'izay ianao. Tsy ampy ny fotoana anananao ka tsy dia hitanao loatra ny mety hisian'ny fanoratana ny asan'ny tetikasa manokana amin'ny fotoana voatondro. Amin'ity tranga ity dia tokony hampiasa ny fanampian'ny masoivohon-tsoratray izahay. Ny mpanoratra dia avy amin'ny asa akademika rehetra miaraka amin'ny mari-pahaizana anjerimanontolo mifanaraka amin'izany. Noho izany tsy olana lehibe ho anay ny manara-maso ny mpanoratra sahaza anao amin'ny asanao.
Noho izany dia asa ara-dalàna ny fanomezana ny asanao any amin'ny iray amin'ireo mpanoratra anay. Ampidirinao ao amin'ny tetikasanao ilay mpanoratra matoatoa. Ny fifanakalozana mivantana eo aminao sy izahay na ny mpanoratra anay dia hanome anao hevi-baovao vaovao azonao resahina amin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny ekipa.
Ny firaketana an-tsoratra ny anjaranao amin'ny tetikasa no fototry ny fanombanana manaraka. Zava-dehibe tokoa noho izany ny fanatrarana kilasy famaranana tsara eto. Ny fanarahana ny mason-tsivana amin'ny asa siantifika dia azo antoka amin'ny asantsika. Alohan'ny handefasana anao ny valiny voasoratra farany amin'ny ampahan'ny asanao, ny asa dia mandalo dingana maro amin'ny fitantanana kalitao ao amin'ny orinasanay. Anisan'izany ny fizahana plagiarism, izay tanterahina amin'ny dingana telo. Ny dingana voalohany dia ny fandinihana ny sanganasa amin'ny alàlan'ny rindrambaiko plagiarism, satria ampiasaina any amin'ny anjerimanontolo sy oniversite io ankehitriny. Mampiasa rafitra rindrambaiko mahaleo tena maromaro izahay. Raha misy tatitra momba ny plagiarism dia hampahafantarina ny mpanoratra amin'ny matoatoa miaraka amin'ny fangatahana hanova ireo ampahany mifandraika amin'ny lahatsoratra.
Ny dingana faharoa dia misy fanadinana ataon'ny mpitantana kalitao. Ny fanamarinana dia tanterahina amin'ny tanana amin'ny alàlan'ny fizahana andalan-tsoratra amin'ny Internet.
Ny dingana fahatelo dia ny manamarina raha marina ny fitanisana. Nojerena ny teny nalaina rehetra ary zahana raha mitanisa ny marina.
Nojerena avy eo ny asa raha mifanaraka tsara amin'ny fomba ofisialy voatondro. Ny fanovana dia misy fanovana lahatsoratra
Mahay mamaky teny
Fampidirana ireo teny mitovy hevitra mba hialana amin'ny famerimberenana teny
firafitry ny asa lojika sy
hijerena ny fahamarinan'ny fanambarana voalaza.
Ny fanitsiana matihanina dia hamadika ny lahatsoratra siantifika ho kilasy voalohany.
"Tsy afaka naniry ny hanao tetikasa tsara kokoa aho!"
Bakalorea amin'ny fianarana ara-kolontsaina
Efa akaiky ny fe-potoana fandefasana anao, mbola mila mianatra sy mahalala momba ny fanadinana amin'ny oniversite ho avy ianao Olana ara-potoana tsy afaka manohy? Ny fananganana ny fiaraha-miasa dia misy voankazo kely ihany koa ary traikefa mahasosotra.
Tsy misy olana, eto izahay mba hanampy! Miaraka aminay ianao mahazo fanampiana matihanina avy amin'ny za-draharaha sy mpanoratra mahay mahay, na inona na inona lohahevitra! Ireo mpamantatra matoatoa antsika dia manana topy maso feno sy vaovao momba ny literatiora amin'ny sehatra misy azy avy, ary tena mahalala ny voambolana mifandraika ary mahalala ny fomba fampiasana fomba manokana lohahevitra mba hanatsarana ny Asa eo amin'ny tetikasa hamita soa aman-tsara. Miaraka amin'ny ekipanay eo anilanao dia afaka mianatra ho an'ny fanadinana ho avy ianao ary tsy mila miahiahy momba ny siansa ataonao intsony Asa eo amin'ny tetikasa ataovy fa tsy misy adin-tsaina ataon'ny vondrona.
Manampy ireo matihanina
Ireo mpampanonta anay dia manam-pahaizana akademika amin'ny sehatr'izy ireo ary mamorona ny siansa arakaraka ny fanirianao manokana.
Mba hahazoana fanampiana
Alefaso fangatahana maimaim-poana izao ary ho azonao amin'ny siansa safidinao ny asanao ara-tsiansa! Mampihatra ny asanao ara-potoana izahay.
Manaova fangatahana maimaimpoana
Miavaka ny asa tsirairay
Manolotra anao izahay fahalalahana azo antoka amin'ny plagiarisme sy lesoka amin'ny alàlan'ny fanamarinana kalitao be dia be ary noho izany dia manaporofo fa ny asanao dia kopia tokana avo lenta. Tsy misy plagiarism, tsy misy vokany - manoratra matoatoa matihanina.
Mangataha entana tsy manam-paharoa
Noho ny fanampiana haingana sy mavitrika avy amin'ny papernerds dia afaka niomana tsara aho. Misaotra anao!
Jule H.Toerana fampianarana
Ny fanohanana avy amin'ny mpikabary ahy Papernerds.de dia nanome ny asan'ny ato an-tranoko ny famitana farany. Sariaka sy nahay foana ny fifandraisana.
Noho ny fanampian'ny papernerds dia mora be ny nahazo taratasy fiantsoana ho an'ny anjerimanontolo.
Mila S.Alemanina ho fiteny vahiny
Misaotra anao amin'ny fanampiana lehibe. Tena mahafinaritra ny miara-miasa amin'ireo olona mahalala izay ataony. Azo atolotra fotsiny!
Felix M. fanafody
Raha tsy teo ianao dia tsy ho nanao ny fe-potoana farany nataoko! Misaotra. 🙂
Nahazo fanampiana aho satria tsy ho vitako ara-potoana. Ny mpanolo-tsaina ahy dia namaly ahy tokoa ary nanampy be koa tamin'ny dingana fanitsiana. Misaotra, tohizo.
Maxim A.Asa sosialy
AZA ATOA IZAO IZAO
Alefaso mivantana amin'ny mpitantana anao ny fangatahana na ny baiko vaovao avy amin'ny mpanjifanay efa misy.
Novakiako ny fepetra sy fepetra (https://papernerds.de/AGBs/) ary ny fanambarana fiarovana ny data (https://papernerds.de/datenschutzerklarung/) ary ekeko.
FANONTANIANA TSY FAMORIANA
Hiaraka aminay ny angon-drakitrao tsiambaratelo tanteraka tsaboina! Ny asa rehetra dia atao tsy mitonona anarana. Amin'ny alàlan'ny fipihana ny "Request without oblig", dia manome ny fanekeko amin'ny fanodinana ny angon-drakitra manokana mifanaraka amin'ny Fiarovana data.
Serivisy ho an'ny mpianatra laharana 1 any Alemana
Manorata amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifantsika:
Fanoratana matoatoa akademika
Asa eo amin'ny tetikasa
Ho an'ny mpanoratra
Ny zava-drehetra misy ifandraisany amin'ny fanoratana matoatoa
© 2000 - 2021, Papernerds.de. Zo rehetra voatokana.
Vaovao izao: Rehefa apetraka ny kaomandy ary misy ny angon-drakitra, dia hisy ny resadresaka ifanaovana amin'ny mpanoratra anao sy ny iray amin'ireo mpiara-miasa aminay hanomezana anao kalitao tsy misy kilema. Ity serivisy ity dia tafiditra ao amin'ny vidiny isaky ny pejy maimaim-poana amin'ny haavon'ny kalitao antonony.
Mangataha fihenam-bidy 2%!
Hahita vaovao momba ny fanekena ianao, ao anatin'izany ny fandrefesana ny fahombiazana, ny fampiasana ny serivisy serivisy MailChimp, Mailerlite, ny fisoratana anarana amin'ny fisoratana anarana ary ny zonao amin'ny fanafoanana amin'ny fanambarana fiarovana anay.